Wararkii Ugu Danbeeyey Boosaaso Iyo Ciidamada Ugu Badnaa oo Gaadhey | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Xaaladda magaaladda Boosaaso ayaa shalay ilaa saaka degan kadib markii arbacadii ay ciidamo ka tirsanaa daraawiishta Puntland iyo ciidamo beeleed wada socda ay si xoog ah gudaha ugu galeen magaalada.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in maamulka Puntland ay ciidamo iyo tikniko fara badan ku daabulayaan gudaha magaalada Boosaaso waxaana jira taxadar badan oo dadweynuhu ka muujinayaan dagaal dhaca.
Ilo-wareedyo ku sugan magaalada ayaa sheegay in go’aanka xukuumadda Saciid Deni ay ciidamo dheeri ah ugu soo daabuleyso magaalada uu horseedi karo dagaal dib uga qarxa.
Dagaalkii arbacadii ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa ahaa mid la saadaalinayay maalmaahaan oo dhan sababo la xiriira tallaabada ay qaaday xukuumadda Deni oo ay kula wareegeyso shirkadda PDG.
PDG waa shirkad illaa muddo dheer soo shaqeenaysay, waxaa leh ganacsato reer Bari ah uu ugu tun weynyahay ninka ka danbeeyay abaabulka ciidamada soo galay Boosaaso oo loogu yeero Bashiir C/llaahi Saalax Deer.
Shirkadda ayaa ciidamada PMPF-ta ee Imaaraadka taageerto u qaabilsanyihiin wixii loogistika ah, halkaas oo ay macaash fiican ganacsatadaasi ugu jirtay ka hor inta aysan isku dhicin saaxiibbadii markii hore ku shirkoobay.
Dhinaca kale, waxaa magaalada ka socda olole nabadeed oo ay wadaan culimada iyo waxgaradka kale ee ku dhaqan si xal looga gaaro xiisadda.
Culimada, isimada iyo nabadoonnada gobolka Bari ayaa sheegay inay wadaan dadaal nabadeed oo ay doonayaan in xal laga gaaro wax walba oo nabadgelyo xumo keeni karo.
Previous articleDEG DEG: Dagaal culus oo ka socda Buuraleyda Galgala, Saldhig la difaacay & Weerarkii ugu cuslaa.
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo galabta dalka dib ugu soo laabtay & Wasiir Cawad oo kashifay arrimo badan
axmed November 15, 2019 At 12:05 pm
Bosaso waa in lagu kala baxaa, ma soconeyso jabhadeyn, hala soo qabto kuwa qaska ka dambeeya, deni, kubbada adaa lagugu soo laadey wataa.
Dab La Ridey November 15, 2019 At 1:51 pm
Ciidamaddi uu watey Ninki Cali Saleebaan ee ka yimid Maraykanka weli wuxu haysta qayb ka mid ah Bosaso wuxuuna qabsaday maxaabis badan oo askarti DENI.
Cali saleebaan iyo Dishiishle oo magaaladda Bosaso iyagu iska leh Taariikh ahaan iyo degaan ahaan in Kooxda yar ee ”’ AL-ITIXAAD ”’ ama ”’ Aaranjaan ”’ loo yaqaano ay ku amar-kutaagleeyaan wax la aqbali karo ma aha cali saleebaan waa diiday arintaas.
Bosaso noqon kari mayso meel ay itixaad siday doonaan ka yeelaan.
Mr Deni 6 bilood ayu ku soo xidhay oo soo dumiyey Puntland oo meel walba xabad iyo dagaal ka taagan tahay maxaa kalo hadhay oo laga sugaya.
Marxuum cabdulahi yusuf wuxu yiri Al-itixaad khatar bay ku tahay nabadda puntland iyo somaliya.
Ogow aaranjaan waxa wata Ciise maxamud iyo cusman maxamud, Cumar maxamud xoog buu ula dagaalamay Al-itixaad ama Aaranjaan qofba sidu u yaqaano wakhtigi marxum cabdulahi yusuf.
qof ay iyagu wataan ayaa ka shaqayn kara puntland dadka kale daaqaday kala baxayaan.
Dadka umaleeya in Deni uu wax wanaagsan soo wado wey ka caqli xun yihiin aaranjaan.
Cali Saleebaan wey hubaysan yihiin si xoog leh waxaa kale oo si xoogle u hubaysan Dishiishle.
hadday noqoto xoog la isu sheegto wale waa lagu jabayaa Bosaso allow yaa u sheegay Al-itixaad.
axmed November 15, 2019 At 9:43 pm
Dagaal waa khasab in uu dhaca, ilaahey waa baajin karaa, laakiin xaalku sidauu hadda u socdo, Rag tijaara ayaa keenay maleeshiyada, iyaga oon tooda la yeelin, waxay dheheen waa dagaal. hadii meeshaa dagaal ka dhaca wixii khasaare yimaada iyaga ayaa dhaarka saari doona, hadda ganacsi beyba ka hadlayaane, dhiig haduu dhaco ,waa yaa ka masuula.
Nuur November 15, 2019 At 11:08 pm
war ninka dablaridey la yiraahdo dhiig tolkii jecelaa, oo berigii hore waxaan moodi jiray inuu ninku tolkii u turu lahaa.
Dab La Ridey November 16, 2019 At 4:28 am
Tolkay Dhiigiisa ma jecli mana Rabo laakin Dulmiga ma shaqayn karo, waxaana ka socda Bariga Puntland waa Dulmi iyo wax aan la aqbali karin.
Majeerteen ayaa dacwoonaya oo ka cabanaya dulmiga bal hartiga kale iskaba Da’a ?
Anigu waxaan ka soo horjeedaa ”’ AL-itixaad ”” ama Aaranjaan waxa hadda loo yaqaano.
weliba kuwi oo haysta ”’Isgaarsiinta”’ Puntland & Ganacsiga oo dhan bal ka waran.
Marxuum Cabdulahi yusuf iyago intaas ka awood yar ayu baacsaday oo saaray Buuraha ”Highlands ”
loo yaqaano. bal ka waran kuwi oo hadda xoog yeeshay.
Ninkan Jareerta ah ee DENI loo yaqaano lix bilood ayu ku soo xidhay mustaqbalki puntland waxaynu dhowrno waa waxa ka soo socda Bari !!